Sunaulo Nepal | त्यसै हानिएको हैन सप्तरीमा गोली, यी हुन सप्तरी घटनाका डिजाइनर त्यसै हानिएको हैन सप्तरीमा गोली, यी हुन सप्तरी घटनाका डिजाइनर – Sunaulo Nepal
जहाँसम्म एमालेमाथिको आरोपको कुरा छ । के एमालेले शान्तिपूर्वक सभा सम्मेलन नै गर्न नपाउने ? एमालेले मधेशमा सभा गर्न नपाउने अनि मधेश केन्द्रीत दलले हिमाल-पहाडमा गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ ? एमालेका केही नेताहरुको अभिव्यक्तिको विषयमा समिक्षा हुन सक्ला । तर, एमालेलाई रोक्ने, कार्यक्रम नै गर्न नदिने, कार्यक्रम बिथोल्न आदेश दिने यो कस्तो लोकतान्त्रिक चरित्र हो ? यसैका लागि ल्याइएको हो सयौंको बलिदानीबाट लोकतन्त्र ?
२४ फाल्गुन २०७३, मंगलवार ०८:२३ मा प्रकाशित